Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Sidee loo daaweeyaa hurdo la'aanta iyo ka-hortagga welwelka?
Muusku wuxuu garaacaa hurdo la'aan iyo ka-hortagga werwerka, oo ay ansixisay US FDA.
Shirkadda TCI Co., Ltd ayaa muddo dheer ku hawlanayd cilmi-baadhista iyo horumarinta qolofta muuska iyo xadhkaha muuska, waxaanay ugu dambayntii sannadkan badhtamihiisii ​​ogolaatay oggolaanshaha FDA NDI ee Maraykanka, iyadoo noqotay muuskii ugu horreeyay ee NDI-da adduunka. Waa guul muhiim ah oo soo saarta muuska Taiwan ay soo gasho caalamka, waxayna fursad fiican u haysataa inay la wareegto tobanaan bilyan oo doollar oo cunto caafimaad ah gudaha Maraykanka.
TCI ee Taiwan waxay ku dhawaaqday in "Banana Peel, Banana Stamen" ay heshay kabka cuntada cusub ee FDA ee jawaabta badbaadada NDI, oo loo ogolaaday liiska suuqa Maraykanka. Tani sidoo kale waa kiiskii ugu horreeyay ee adduunka oo dhan in muuska cuntada ee cusub ee ka hortagga walaaca iyo mooska cusub ee cuntada labka ah ay shahaado siiso US FDA, kaas oo la filayo inuu kaxeeyo warshadaha muuska gudaha iyo inuu galo tobanka adduunka. balaayiin doolar oo suuqa cuntada caafimaadka ah. Qolalka muuska iyo xadhkaha muuska ayaa laga isticmaalaa wadamada Yurub iyo Ameerika, sababtoo ah ma jiraan taariikh cunto iyo alaabta ceeriin ah oo la soo dhaafay, ha ahaato codsiga cuntada caafimaadka ama kor u qaadista gargaarka caafimaadka, had iyo jeer way adagtahay. Waagii hore, qolofta muuska, sida qashinka beeraha ee asal ahaan la tuuray oo loo isticmaali karo oo kaliya qashinka jikada, ayaa dhamaantood loo beddelay alaabta ceeriin ee ugu muhiimsan ee cuntada caafimaadka leh ee hoos timaada horumarinta tignoolajiyada xooggan ee TCI.
Tirada dadka la ildaran walaaca iyo niyad-jabka adduunka ayaa sii kordhaya sannadba sanadka ka dambeeya. TCI-da asalka ah ee shatiga leh ee "Muuska Peel Ultrasonic Cold Extraction", muuska farxadda leh ee laga soo saaro diirka muuska, ayaa leh maaddooyin la mid ah daawada melancholic Prozac, taas oo si weyn u hagaajin karta walbahaarka, welwelka iyo hurdo la'aanta. Daraasadda xayawaanku waxay muujisay in laga soosaaray qolofka muuska ee afka laga maamulo lagu ogaaday inay leeyihiin ka-hortagga welwelka iyo niyad-jabka ee la socodka dhaqdhaqaaqa habdhaqanka. Daraasaduhu waxay sidoo kale muujiyeen in qolofta muusku ay hagaajin karto dariiqa dheef-shiid kiimikaadka tryptophan ee la xidhiidha muujinta hidda-wadaha, kor u qaadida soosaarka serotonin iyo melatonin ee jidhka bini'aadamka, oo ay gaaraan saameyn hurdo-fure ah. Hal abuurka Muuska Farxada leh ayaa ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin abaalmarinno gaar ah iyo billado dahab ah oo lagu qabtay Bandhigga Hal-abuurka Geneva ee Switzerland.
Intaa waxaa dheer, Happy Angel waxay inta badan isticmaashaa istamenka muuska, oo ah wax soo saarka muuska, kaas oo soosaarkiisu uu ka hortagi karo bararka qanjirka 'prostate'. Daraasaduhu waxay caddeeyeen in ay si wax ku ool ah u yareeyn karto wax soo saarka dihydrotestosterone ee unugyada xiniinyaha waxayna si wax ku ool ah u xakameysaa faafinta unugyada qanjirka 'prostate' ee bini'aadamka. Waxay sidoo kale ku guuleysatay bilada dahabka ee Bandhigga Hal-abuurka Geneva. Hadda qolof mooska iyo istamanka muuska ay ansixisay US FDA NDI, waa guul muhiim u ah wax soo saarka beeraha Taiwan-mooska inuu soo galo adduunka. Natiijooyinka cilmi-baarista iyo horumarinta ee kala duwan ee qolofta muuska iyo muuska muuska ayaa horumar cusub u horseeday cuntada caafimaadka, iyo sidoo kale waayihii faafitaanka kadib, taasoo siisay macaamiisha doorashooyin badan oo cunto caafimaad ah.